YEYINTNGE(CANADA): Thursday, October 23
https://docs.google.com/fileview?id=F.e2a8b35b-b769-49b8-9c9b-1428b30a1188 တွင်လည်းဖတ်၍ရပါသည်။ ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/23/20080အကြံပြုခြင်း
နာဂစ်စ်မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအမြင်
NCGUB's Post-Nagis Cyclone Review @ Yahoo! Video
ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 23 2008 16:27 - မြန်မာစံတော်ချိန် ကေအန်ယူ ၏ ၁၄ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ကျင်းပပြီးစီးသွားသည့် သတင်းနှင့် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သည့် နော်စီဖိုးရာစိန်ကို အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အခြား မျက်နှာသစ် ခေါင်းဆောင်များလည်း တက်လာကြသည်။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေပြီ ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ် တာမလာဘောမှ အပ ကျန် ခေါင်းဆောင် အများအပြားက ငယ်ရွယ်သေးသူများဟု ဆိုလျှင် ရနိုင်သလို၊ ကရင့်တော်လှန်ရေးကို နောက်ထပ် မျိုးဆက်သစ်တခုထဲသို့ စ၍ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပြီဟု ဆိုလျှင်လည်း ရနိုင်ပါသည်။ ယခု ခေါင်းဆောင် အများစုမှာ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ကရင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို စတင်ခဲ့သူများ မဟုတ်ကြပါ။ မျိုးဆက်သစ်များဟု ဆိုလျှင် ရနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသမီးတဦးကို အရေးပါသည့် နေရာ တာဝန်ပေး ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းမှာလည်း ထူးခြားသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးတို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ကဏ္ဍကို အလေးပေးလာသည်ဟု ဆိုနိုင်သကဲ့သို့၊ နောက်ထပ် ဖြစ်ထွန်းလာသည့် လူမှု လှုပ်ရှားမှုသစ်များ (တနည်း စစ်တပ်အခြေခံ မဟုတ်သည့် အရပ်ဖက် လူမှုလှုပ်ရှားမှု civil society, new social movement) များကို နေရာ ပေးလာခြင်းဟုလည်း ပြောလျှင် ရနိုင်မည်ဟု ထင်သည်။ အရပ်ဖက်အင်အားစု (civil society) အုပ်စုများနှင့် ပို၍ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှု အားကောင်းလာသည်ဟု ပြောလျှင်လည်း ရနိုင်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ညီလာခံ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များကို မတွေ့ရသေးပါ။ မည်သို့သော မူဝါဒများ ခေတ်နှင့် အညီပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးပါမည်နည်း။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းနေသည်။ သေချာသည်ကတော့ ကေအန်ယူ ခေါင်းဆောင်မှုသစ် အနေဖြင့် ယခင်တကြိမ်က သူတို့ဘိုးဘေးများ၊ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟု ခေါ်သည့် မြေသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာစဉ် ကာလကလို ရေထိုး၊ သဲစီး ခက်ခဲသော တော်လှန်ရေးနှင့် လူမှု လှုပ်ရှားမှု မြစ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းကြရဦးမည် ဆိုသည်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှု အသစ်အတွက် အခက်အခဲ၊ စိန်ခေါ်မှု များက စီးကြိုနေကြပါသည်။
ကရင်လူမျိုးတို့တွင် ရှေးအစဉ်အဆက်က နှုတ်တိုက်ချပေးလာကြသည့် "ထားလင်္ကာ" များအရ သူတို့၏ သမိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကရင်လူမျိုးတို့က တချိန်က မွန်ဂိုကုန်းမြင့်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ယူဆပြီး ဘီစီ ၁၁၂၈ ခန့် တွင် တောင်ဖက်သို့ ရွှေ့ပြောင်း အခြေချလာကြသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ဒဏ္ဍာရီဆန်လှသည့် ခေါင်းဆောင် "ထော့မဲပါ" က ဦးဆောင်၍ အခက်အခဲများ၊ မြစ်ချောင်း၊ တောင်တန်း အတန်တန်ကို ဖြတ်၍ ပြောင်းရွှေ့လာကြသည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ ထီးဆဲမက်ရွာကို ကရင်လူမျိုး အတော်များများက သိကြသည်။ "သဲစီးသောချောင်း" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး မွန်ဂို ကုန်းမြေမြင့်မှ ဆင်းသက်လာရာလမ်းတွင် ဂိုဘီသဲန္တာရကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်ဟုလည်း ဖော်ပြ ပြောဆိုကြပါသည်။ ယနေ့ ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကရင်အမျိုးသားများ၏ လူဦးရေကို ၃-၅ သန်းကြားဟု ခန့်မှန်းကြသလို၊ စင်္ကာပူ ကရင်ဆယ်မီနာ တခု၏ မှတ်တမ်းအရ ၇ သန်း (ကရင်ပြည်နယ်တွင် ၁. ၅ သန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ၀. ၇၅ သန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ၁. ၅ သန်း၊ ပဲခူးတိုင်းတွင် ၀. ၇၅ သန်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ၀. ၅ သန်း၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် ၁ သန်းနှင့် အခြားနေရာဒေသများ တွင် ၁ သန်းခန့် ရှိနေမည်ဟု တွက်ချက် ထားကြသည်။)
သို့သော်လည်း ကရင်လူမျိုး မိတ်ဆွေတဦးက ပြောသည်ကို စိတ်မချမ်းမြေ့စွာ ကြားခဲ့ရဖူးသည်။ "ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ ကျနော်တို့ ကရင်လူမျိုးတွေ အခုနှစ်များမှာ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချနေကြရတဲ့ ဖြစ်ရပ်က အရင် မွန်ဂိုကုန်းမြင့်က အစုအပြုံလိုက် ပြောင်းရွှေ့လာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံး ရွှေ့ပြောင်းရမှုကြီးလို့ ဆိုနိုင်တယ်"။
သူက ယခု တတိယနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေ ထိုင်ခြင်းများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ သိန်းကျော်သော ဒုက္ခသည်များ၊ ပြည်တွင်း၌ အိုးအိမ်အခြေပျက်၍ ရွှေ့ပြောင်းထွက်ပြေး နေကြသော ပြည်တွင်းဒုက္ခသည် IDPs များကို ရည်ရွယ်ပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူပြောသည်မှာ ဖြစ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ကရင်လူမျိုး အရေအတွက် ၂ သိန်းခန့် ရှိနေပြီး၊ (တီဘီဘီစီ) အဖွဲ့အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင် ပြည်တွင်းဒုက္ခသည် IDPs အရေအတွက် ၅ သိန်းကျော် ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားရာ၊ အများစုမှာ ကရင်လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုမျှမက ထိုင်းနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် တရားမ၀င် လာရောက်ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ အများအပြားလည်း ရှိနေပါသေးသည်။ မိန်းမပျိုလေးဟု ခေါ်သော ကရင်စကား "မူးနော်" က ယခု တော့ "အိမ်ဖော်၊ အိမ်စေ" ဟု အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်လာကြောင်း ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ကရင်လူမျိုးများ အခြေအနေကို မခိုင်မာကျော်ဇော ကလည်း စာရေးဖူးသည်။ ကရင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ရွာများတွင် အားကောင်းမောင်းသန် လူငယ်မကျန်တော့၊ ကလေးများ နှင့် ကျီးစောင့်ကြက်နှင် အဖိုးအဖွားအိုများသာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်းလည်း မျက်မြင်အချို့က ပြောပြကြပါသည်။ နှစ်ရှည် ကြာမြင့်လာပြီ ဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းစစ်၏ ဒဏ်များ ဖြစ်နိုင်သလို၊ စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့် တနိုင်ငံလုံး အခြေအနေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဤဖက်ပေါင်းစုံ အခြေအနေများကို တွေးလျှင် ကရင် ခေါင်းဆောင်မှုသစ်အတွက် မေးခွန်းများစွာ ရှိလာနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသားရေး အာမခံချက် အတွက်နှင့် လွတ်မြောက်ရေး စစ်ပွဲကို ဆက်လက် ဆင်နွှဲမည်ဟု ဆိုပါသည်။ မလွတ်မြောက်သော လူမျိုးတမျိုးက ခုခံကာကွယ် စစ်ဆင်နေရမည့် အရေးကို မေးခွန်းထုတ်ဖွယ် မရှိပါ။ သို့သော်လည်း မပြီးမစီးနိုင် စစ်ပွဲ၏ အကျိုးဆက်များကို ဆက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စဉ်းစားသင့်ပြီဟု ထင်လာမိသည်။
ပညာရှင်များက ပြေလည်မှု မရနိုင်တော့မည့် ပဋိပက္ခမျိုး (Intractability of conflict) ရှိသည်ဟု လေ့လာချက်အရ ဆိုခဲ့ကြ ဖူးသည်။ ပဋိပက္ခက နှစ်ရှည်လာပြီး အမယ်ဘုတ်သူ့ချည်ခင် ရှင်းရမရတော့မည့် ကိစ္စမျိုးကို ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဂျွန် ပေါလ် လက်ဒရစ် (John Paul Lederach) က ပြေလည်မှုမရနိုင်တော့မည့် ပဋိပက္ခမျိုးဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရာတွင် ခေါင်းမာ တင်းခံနေသည့်၊ ပြင်းထန်သည့်၊ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာ ဖြစ်နေသည့်၊ ပြေလည်မှုရရန် ခက်ခဲသည့် ပဋိပက္ခမျိုးဟု ဆိုသည်။
တိုင်းထွာမှုအရ တနှစ်လျှင် လူ ၁၀၀၀+ သေဆုံးနေရသည့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခမျိုးကို သူက "စစ်" ဟု သတ်မှတ်သည်။ အကယ်၍ ဤသို့ လူ ၁၀၀၀+ သေဆုံးရမှုက ဆယ်စုနှစ်တခု၊ နှစ်ခုထက်ပို၍ ကြာရှည် ဖြစ်လာပြီဆိုလျှင် လက်ဒရစ်က "ပြေလည်မှု မရနိုင်သည့် ပဋိပက္ခ" ထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါသည်။ သူတင် ကိုယ်တင် ရန်ကြွေးများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်အရဆိုလျှင် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မှ စတင်လာခဲ့သော ကေအန်ယူ၏ တော်လှန်ရေးသည် ဆယ်စုနှစ် ၆ ခု တိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့သက်တမ်း အရှည်ဆုံး တော်လှန်ရေးတခုဟု ဂုဏ်ယူဖို့ ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤစစ်ပွဲအတွင်းမှာပင် အမျိုးကောင်းသား၊ အမျိုးကောင်းသမီးတို့၏ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်၊ ဘ၀၊ အနာဂတ် အလားအလာများ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသကဲ့သို့ နောက်ဆုံး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးသည်ပင် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ကျရှုံးနိုင်ငံ (failed state) ဖြစ်လုတည်းတည်း အခြေအနေသို့ ဆိုက်နေရပြီ ဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေတွင် ကေအန်ယူအနေနှင့် တွေ့ဆုံငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဆွေးနွေးအဖြေရှာရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို မငြင်း ပယ်ခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်း ဤသို့ ပြေလည်မှု မရနိုင်တော့သည့် ပဋိပက္ခအဖြစ်သို့ ကျဆင်းရမည့် ထောင်ချောက်မှ ရုန်း ထွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤသို့ ဖြစ်စေရန်အတွက်လည်း ဖက်အသီးသီးမှ အားစိုက်ထုတ် ကြိုးပမ်းရမှုများ၊ သဘောထား ကြီးရမှု၊ အနစ်နာခံရမှုများလည်း လိုအပ်လိမ့်ဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း မိမိက မျက်စိထဲ မြင်ကြည့်သည်။ ကေအန်ယူနှင့် စစ်အစိုးရ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲသစ်များတွင် အမျိုးသမီး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးသစ်က စားပွဲတဖက်တွင် ကေအန်ယူ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ထိုင်နေသည် ဆိုပါစို့။ ရှေးရိုးစွဲဆန်လွန်းသော၊ မဟာဖိုဝါဒီ၊ စစ်ဝါဒီ အယူအဆများကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် စစ်အစိုးရဗိုလ်ချုပ်များအဖို့ အတော် မသက်မသာ ရှိနိုင်ပါသည်။ ယခင်က ကေအန်ယူနှင့် မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ခဲ့ကြဖူးသည် မဟုတ်ပါ။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၆ ဖဆပလ အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင်သာ မစ္စက် ဘမောင်ချိန်က ကြား ခုံသမာဓိလူကြီးအဖြစ် ပါခဲ့ဖူးသည်။ နောက်ပိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်များ မတွေ့ခဲ့ရပါ။ အကယ်၍ ယခုတကြိမ် ပြန်၍ စစ်အစိုးရနှင့် ကေအန်ယူအကြား ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့လျှင် အသစ်အဆန်း အတွေ့အကြုံ ဖြစ်နိုင်သလို၊ တိတ်ဆိတ်မှုများ ဖြိုခွင်းခဲ့သည့် (တနည်း ကရင်ပြည်နယ် အတွင်း စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ဖွင့်ချ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် "Shattering Silences report ထုတ်ဝေခဲ့သည့်) အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်တဦးကို မည်သို့မည်ပုံ တုံ့ပြန် မည်ဆိုသည်ကလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။
တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် ကေအန်ယူ ခေါင်းဆောင်မှု အနေနှင့် လူမျိုးရေးအရ စဉ်းစားမည်ဆိုလျှင်လည်း မေးခွန်းများ ရှိနေပါ သည်။ ကျနော့်မိတ်ဆွေ ညည်းညူပြောဆိုခဲ့သလို ကရင်လူမျိုးများ အစုအပြုံလိုက် ပြောင်းရွှေ့နေကြရမှုက မွန်ဂိုလီးယား ဒေသမှ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသည့် ကာလ၊ စတင်ပြောင်းရွှေ့ အခြေချလာချိန်မှစ၍ ယခုအချိန်သည် နောက်ထပ် "ဒုတိယအကြိမ် ပြောင်းရွှေ့အခြေချရမှု" (second migration) ဟု ခေါ်ဆိုရလောက်အောင် ပြဿနာ ကြီးကျယ်နေပါပြီလား။ သို့ဆိုလျှင် ဤပြဿနာကို လူမျိုးရေးအရ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လာပြီဟု မြင်လာပါသည်။ ပြောရလျှင် ယနေ့ အခြေအနေသည် ကရင်လူမျိုးများအတွင်း သွေးစည်းညီညွတ်မှု၊ စုစည်းနိုင်မှု အားအနည်းဆုံး အခြေအနေကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ စစ်အစိုးရ တက်လာချိန် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ နယ်စပ်ရှိ လွတ်မြောက်နယ်မြေ၊ အခြေစိုက်စခန်းများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကရင်အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် အင်အား အကြီးဆုံး ဖြစ်သည့် ကေအန်ယူမှ အင်အားများ (စစ်အစိုးရ၏ သွေးခွဲသပ်လျှိုမှုကြောင့်ပင် ဆိုဆို) ကွဲပဲ့ထွက်ခဲ့ကြရသည်။ ဒီကေဘီအေ၊ ယခင် ဗိုလ်မှူးသုမူဟဲ ဦးဆောင်သည့် တပ်ရင်း ၁၆-အုပ်စုများ၊ ဖဒိုအောင်ဆန်းဦးဆောင်သည့် ဘုရားကုန်း ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှသည် နောက်ဆုံး တပ်မဟာ-၇ တပ်မှူးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင်ဦးဆောင်သည့် အင်အားများ ကွဲထွက်ခဲ့ရသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ အချင်းချင်း သွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများပါ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကေအန်ယူ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဟောင်း ဖဒိုမန်းရှာသည်ပင် ဤသို့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။
ကရင်အမျိုးသားထုများအတွင်း အမျိုးသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေး အရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီဟု ကျနော်ဆိုချင်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် အသစ်တက်လာသည့် ခေါင်းဆောင်မှုအဖို့ ကရင်တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း သွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်နေမှုများကို အလျှင်အမြန် ရပ်စဲပစ်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ စကော၊ ပိုး၊ တောင်ပေါ်၊ မြေပြန့် စသည့် ကရင်အမျိုးသား အုပ်စုများကြား သာမက နိုင်ငံရေးအရ အမြင်၊ မဟာဗျူဟာ ကွဲပြားနေသည့် အုပ်စုများကြားတွင်ပါ ဘုံတူညီနိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှာဖွေ၍ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးကို အရေးတကြီး ပြန်လည် တည်ဆောက်ရတော့မည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့သော မဟာဗျူဟာကို ချမှတ်သည်ဖြစ်စေ အာဃာတများဘေးချိတ်၍ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးကို ပြန်လည် ခေါင်းငဲ့ကြည့်ရတော့မည့် အချိန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ကေအန်ယူအနေနှင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော်လည်း အခြားသော အမျိုးသားရေး အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ကိစ္စများကိုလည်း ဆက်လက်စဉ်းစားရန် လိုအပ်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ကရင်အမျိုးသား ဆယ်မီနာတခု ကျင်းပဖူးပြီး၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ အချို့သော ကရင်အမျိုးသား များက ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံတော် (nation ဟု သုံးထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။) ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် ကဏ္ဍ ပေါင်းစုံ လမ်းပြမြေပုံ ၁၂ ခုကို ရေးခဲ့ဖူးကြပါသည်။ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းပြမြေပုံ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေနှင့် ဘာသာ စကား ဆိုင်ရာ လမ်းပြမြေပုံ၊ စီးပွား ဘဏ္ဍာနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လမ်းပြမြေပုံ၊ အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ စာရင်းအင်းနှင့်ဒေတာဘေ့စ် ဆိုင်ရာကိစ္စ၊ နောက်ဆုံး နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်ရေးရာနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ လမ်းပြမြေပုံများကို စိတ်ကူးမှန်းဆ၍ ပုံထုတ်ခဲ့ကြဖူးပါသည်။) ဤအစည်းအဝေး၏ စဉ်းစားချက်များက သိပ်ပြီး လက်တွေ့မဆန် စိတ်ကူးယဉ်လွန်းနေသည်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရှေ့ကို ရောက်နေနှင့်သည်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ ကေအန်ယူ ခေါင်းဆောင်မှု အသစ်အနေနှင့် ပို၍ ဖက်ပေါင်းစုံသည့် အနာဂတ် ရေးစဉ်းစားချက်များကို ပြင်ဆင်သင့်သည့် အချိန် ဖြစ်သည်ကတော့ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ညီလာခံရလဒ်များတွင် အလားတူ စဉ်းစားချက်များ ရှိခဲ့မည်ဟုလည်း ယူဆပါသည်။ ထိုမျှမက ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကရင်အမျိုးသား အင်အားစုများ ပူးပေါင်း၍ မိမိတို့လူမျိုး ဖွံ့ဖြိုးတ်ိုးတက်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားအတွက် မည်သို့ မည်ပုံ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုလည်း ခေါင်းချင်း ရိုက်ရတော့မည့် အချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမက အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး ကိစ္စများကိုလည်း အာရုံထား ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါလိမ့်ဦးမည်။
အနာဂတ်က ဝေးပါသေးသည် ထားဦး။ ကေအန်ယူ အဖွဲ့အစည်း၏ ရပ်တည်ရေးကို အနီးကပ် ခြိမ်းခြောက်နေသည့် ကိစ္စများလည်း ရှိနေပါသေးသည်။ သဘာ၀၀န်းကျင်ကို အကန့်အသတ်မရှိ ဖျက်ဆီး အသုံးချနေမှုများနှင့် သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် ဆည်များ တည်ဆောက်တော့မည့် ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် (၂၀၀၃) ကရင် ဆယ်မီနာက အကယ်၍ ကရင်ပြည်နယ်တွင် အေးအေးချမ်းချမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့လျှင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံ အပါအ၀င်၊ ရေအရင်းအမြစ်များ အသုံးချမှု (ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ် ဆည်များ) နှင့် အခြားလုပ်ငန်းများကြောင့် လာမည့် နှစ် ၂၀ အတွင်း အမျိုးသားစုစုပေါင်း ထွက်ကုန်တန်ဖိုး (GDP) တနှစ်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း (၅၀၀၀) မှ (၇၀၀၀) ကြား ရရှိနိုင်မည် ဟု ခန့်မှန်းခဲ့ကြဖူးသည်။ သို့သော်လည်း လက်ငင်း သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်တော့မည့် ဆည်များက ကေအန်ယူ အဖွဲ့၏ တည်ရှိမှုကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ သန်း ၁,၀၀၀ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုရှိသည့် ဟတ်ကြီးဆည်ကို မကြာမီ စတင် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လျှပ်စစ် တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံရှိ EGAT ကုမ္ပဏီက ကြေညာထားပြီး ဖြစ်သည်။ ဟတ်ကြီးဆည်ပြီးလျှင် ၀ဲကြီးနှင့် ဒါးကွင်းဆည်များကို ဆက်လက် တည်ဆောက်ကြ ဦးမည် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာများက ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်များ အခြေပြုနေကြသည့် နေရာများ ဖြစ်နေပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုအသစ် အနေနှင့် ဤသို့ ခြိမ်းခြောက်လာတော့မည့် ရပ်တည်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကိုလည်း ယှဉ်၍ စဉ်းစားရဖွယ် ရှိနေပါသည်။
နောက်ဆုံး ပြောရသော်လည်း အရေးကြီးသည့် ကိစ္စများ ရှိပါသေးသည်။ ကေအန်ယူ ခေါင်းဆောင်မှု အသစ်အနေနှင့် မိမိ လူမျိုးတရပ်လုံးနှင့် အခြားသော တော်လှန်ရေး အင်အားစုများ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများအတွက် မည်သို့ စိတ်အားတက်ဖွယ် မျှော်လင့်ချက်၊ ရည်မျှော်မှန်းချက်များ (Vision, Hope) ပေးမည်နည်း ဆိုသည့် ကိစ္စပင် ဖြစ်ပါသည်။ လူအများက အလှည့်အပြောင်းကို တောင်းတနေကြပါသည်။ ၀ါရင့် သဘာရင့် အဖွဲ့ကြီးတခု ဖြစ်သည့် ကေအန်ယူအနေနှင့် ဤကိစ္စကို လည်း ချွင်းချန်ထား၍ စဉ်းစားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
ခေါင်းဆောင်မှုသစ်အတွက် လျှောက်လှမ်းရမည့် လမ်းက အခက်အခဲများ များပြား လွန်းနေပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့်လည်း ကျနော်က ကရင်လူမျိုးများ ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ ရေထိုးသဲစီး မြစ်ကြီးဧရာနှင့် ဤအခက်အခဲ ပြဿနာ များကို နှိုင်းယှဉ်၍ ပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဒဏ္ဍာရီထဲက ထော်မဲ့ပါလည်း သမိုင်းအသစ်တွင် ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ ကရင်လူကြီးများ ဆိုခဲ့ကြသည့် ရှေးဟောင်းထား ကဗျာတပုဒ်အတိုင်း ဖြစ်လာစေဖို့သာ မျှော်လင့်စိတ်ကူးနေမိပါ တော့သည်။
"သာယာဝပြောသော နိုင်ငံ ............
ထိုဒေသ၌ ကလေးသူငယ်များ ညှိုးနွမ်းခြင်းမရှိဘဲ လှည့်ပတ်ပြေးကစားလျှက် ရှိကြပါသည်။
သင်ရော ကျန်ုပ်ပါ ကြီးသူငယ်သူအားလုံး ပြန်လည်ဆုံဆည်း မြင်တွေ့ကြရလိမ့်ဦးမည်ဟု
အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈။
၁။ ကရင့်သမိုင်းနှင့် ရိုးရာဖြတ်ထုံးများ။ (မန်းလင်းမြတ်ကျော်၏ ရေးသားချက် ကောက်နှုတ်) Drum Publication Group၊ ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာလ။
၂။ Across the River of Running Sand: The Ethnic Karens of Burma – Origin and Folktales, Pa Thoo Plie,
၃။ Building Our Nation, Singapore Karen Seminar 2003, Meeting Minute.
၄။ John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Society, 1999, Third Printing, Washington D.C.: United States Institute of Peace Press.
ထီလက်မှတ်ရောင်းဈေးနှင့် ဆုကြေးငွေများ နှစ်ဆ တိုးမြင့်
ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 23 2008 19:43 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဌာနကြီးမှ ထီလက်မှတ် ရောင်းဈေးနှင့် အမြင့်ဆုံး ဆုကြေးငွေကို လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ နှစ်ဆစီ မြှင့်တင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
တစောင်လျှင် ကျပ် ၁၀၀ မှ ၂၀၀ အထိ ဈေးနှုန်းမြှင့်တင် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သလို၊ ယခင်က အမြင့်ဆုံး ဆုကြေးငွေအဖြစ် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ ချီးမြှင့်သွားမည့်အကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့ နေ့စွဲဖြင့် ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
"လက်ရှိ ရောင်းဈေးက ၁၀၀ နဲ့ ရောင်းတယ်။ အက္ခရာ အလုံးရေက ၃၆ လုံး ရောင်းတယ်။ (က) ကြီးကနေ ကက၊ ကခ၊ ကဂ အထိ ရှိတယ်။ အက္ခရာ ၃၀ ကျရင် "က၊ သ" အထိပဲ ရှိတာ။ အစောင်ရေ လျှော့ချပြီး ဆုကြေး တိုးမြှင့်တဲ့ သဘောပေါ့" ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြားတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော နာမည်ကြီး ထီဆိုင်တဆိုင်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
ဆုမဲပေါင်း ၇၉၉၃ ဆု ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ထီဆိုင်မှ တာဝန်ရှိသူက "ဆုစနစ်ပြောင်းတဲ့ ဟာကို ဖော်ပြတာပါ။ အောင်ဘာလေဖွင့်တဲ့ ရုံးအုပ်က ဖြန့်တယ်ဆိုရင် ကုန်သည်တွေလက်ထဲမှာတော့ အကုန် ကုန်တယ်။ ရုံးချုပ်မှာ မကျန်ဘူး။ ကုန်သည်တွေ လက်ထဲရောက်ရင် မိုးယံ၊ အောင်ဒဂုံ၊ အောင်ဆုပန် စတာတွေက ဖြန့်ချိတာတွေ ရှိတယ်။ တကယ်တော့ ပုံမှန် ၂၀၀ နဲ့ ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ" ဟု ပြောသည်။
ထီ အက္ခရာ ၃၀ ကို စတင် ရောင်းချမည်ဖြစ်ကာ ဆုကြေးအဖြစ် ပထမဆုကို ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ၊ ဒုတိယဆု သိန်း ၅၀၀နှင့် သိန်း ၃၀၀ (၃ ဆု)၊ သိန်း ၂၀၀ (၅ ဆု)၊ သိန်း ၁၀၀ (၁၇ ဆု)၊ ၁၀ သိန်း (၄၉၃ ဆု)၊ ၃ သိန်း (၁၇၃ ဆု)၊ ၂ သိန်း (၁၅၉၃ ဆု)၊ ၁သိန်း (၁၅၇၀၄ ဆု) စသဖြင့် ချီးမြှင့်မည့်အကြောင်း ယနေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာ မြန်မာ့အလင်းတွင် ကြေညာထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက "ထီထိုးမှုတွေ နည်းပါးသွားတဲ့အတွက် ဆုကြေး မြှင့်လိုက်တဲ့ သဘောပါ။ လူတွေကို မက်လုံးပေးတဲ့ သဘော" ဟု ထင်ကြေးပေး ပြောဆိုသည်။
အမည်မဖော်လိုသူ ထီဆိုင်ကြီးတဆိုင်မှ တာဝန်ကျ ၀န်ထမ်းတဦးက "တချို့ ထီဆိုင်တွေကတော့ အရင်တုန်းက ပထမဆု သိန်း ၅၀၀ ပေါက်ရင် သိန်း ၅၀၀ အပိုချ ပေးပေမယ့် အခု သိန်း ၁၀၀၀ ကို ကျတော့ သိန်း ၅၀၀ ပဲ ဆုချမယ်လို့ ပြောနေကြတယ်ပေါ့လေ။ ဒုတိယဆု သိန်း ၅၀၀ ပေါက်ရင် အပိုဆုက သိန်း ၅၀ ပဲ ပေးတော့မယ်။ ကျနော်တို့တော့ မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး" ဟု ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး "တွတ်လိုင်းတွေကို ပင်ရင်း အောင်ဘာလေ ထီဆိုင်တွေက ထုတ်ပေးတယ်။ အရင်တုန်းက အနိမ့်ဆုံးဆုက ၂ သောင်း၊ အခု ဖွင့်မယ့်ဟာက ၁ သိန်း အနည်းဆုံး ဖြစ်သွားတယ်။ မင်္ဂလာစုံတွဲ သိန်း ၁၀၀ တို့ ၊ မင်္ဂလာစုံတွဲ သိန်း ၅၀ တို့ ပေးတယ်။ အခု ပေါက်စဉ် တစဉ်လုံးမှာ သုံးလုံးတူ၊ လေးလုံးတူပဲ သတ်မှတ်ချက် ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေတော့ မရှိဘူး" ဟု ပြောသည်။
ထီလက်မှတ် ရောင်းချရာတွင် အက္ခရာစဉ် မတူဘဲ ဂဏန်းတူများကို တွဲထားကာ အထူးမင်္ဂလာစုံတွဲ တစောင်၊ တစောင် (ရှယ်)၊ နှစ်စောင်ဆိုလျှင် နှစ်မွှာ (ရှယ်)၊ နှစ်စောင်တွဲ (ရှယ်) ၊ နှစ်စောင်တွဲ (ထူးရှယ်) မှ အစ စောင်ရေ ၁၀ အထိ၊ ထို့နောက် ၁၅ စောင်၊ ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၅၊ ၅၀၊ ၉၀၊ ၁၀၀၊ ၃၆၀ နှင့် ၁၀၀၀ စောင်အထိ တွဲယှက်ကာ ရောင်းချကြသည်
WiMAX Broadband ဆက်သွယ်မှုစနစ်ကို ပုဂ္ဂလိကမှ စတင်ရောင်းချ
ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 23 2008 18:49 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ရန်ကုန်။ ။ တယ်လီဖုန်းလိုင်း ရှိစရာမလိုဘဲ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်သော ဘရော့ဘန်း မြန်နှုန်းမြင့် ၀န်ဆောင်မှုအသစ်ကို ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတခုမှ ယခုလမှ စတင် ရောင်းချပေးနေသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများထဲတွင် ပထမဆုံး ၀န်ဆောင်မှု ပေးလာသော REDLINK ကုမ္ပဏီမှ WiMAX ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ရန်ကုန်တိုင်း အနောက်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းခရိုင်တို့တွင် ယခုလအတွင်း စတင်ရောင်းချပေးခဲ့ရာ နိုဝင်ဘာလမှ စတင်၍ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင်ပါ ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ မြန်မာတယ်လီပို့မှ ရောင်းချပေးခဲ့သည်မှာ ၆ လကျော် ကြာမြင့်လာချိန်တွင် ယခုလို ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီကပါ အပြိုင် ရောင်းခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
"တနစ်တော့ မပြည့်သေးဘူး။ ၆ လကျော်ပြီ၊ တယ်လီပို့က ရောင်းပေးနေတာ။ ကျမတို့ တယ်လီပို့ကလည်း ဆက်ရောင်းပေးသွားမှာပါ။ REDLINK ကလည်း သူ့ဟာသူ ရောင်းသွားမှာပဲ။ တခြားစီပါ။ ဈေးနှုန်း တူ၊ မတူ ဆိုတာလည်း မသိပါဘူး" ဟု မြန်မာတယ်လီပို့ ရုံးချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာတယ်လီပို့မှ ကြိုးမဲ့ Broadband WiMAX ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၊ MICT နှင့် Golden Hill ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များမှတဆင့် ဖမ်းယူနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားသည်။
Broadband WiMAX ကို မြန်မာတယ်လီပို့တွင် တိုက်ရိုက်လျှောက်လွှာ တင်နိုင်ပြီး လိုင်းသွယ်တန်းခ Fec ၁၅၀၀၊ နှစ်စဉ်ကြေးအဖြစ် Fec ၆၀ နှင့် လစဉ်ကြေးကို ၁၂၈ kbs ကို Fec ၄၅၊ ၃၅၆ kbs ကို Fec 75 အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အင်တာနက်လိုင်း သွယ်တန်းမည့် နေရာကို နည်းပညာရှင်များမှ ကွင်းဆင်း လေ့လာပြီးမှသာ လျှောက်လွှာတင်သွင်းမှုကို လက်ခံမည် ဖြစ်သည်။
"လျှောက်လွှာတင်တာ ၂ ပတ်ကြာမယ်။ ပြီးတော့ အိမ်အနေအထားကို တယ်လီပို့က အိုင်တီသမားတွေ ကွင်းဆင်းပြီးတော့ လိုင်းတပ်လို့ ရမရ ဆိုတာ သိရပြီးမှ လျှောက်လွှာကို အတည်ပြုမယ်။ အဲဒါပြီးမှဘဲ ငွေသွင်းလို့ ရမယ်။ ပြီးတော့ ၄၅ ရက်အတွင်း တယ်လီပို့ကနေ လိုင်းလာတပ်ဆင်ပေးမယ်" ဟု တယ်လီပို့ WiMAX အရောင်းဝန်ထမ်း တဦးက ပြောသည်။
"အိမ်အနေအထားက မြေနိမ့်ပိုင်း ဖြစ်နေတာတို့၊ အကာအကွယ်များနေရင် တာဝါတိုင်ကို လှမ်းချိန်လို့ မရတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါမျိုးဆိုရင် ဆာဗေး ရလဒ်က Fail ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်အနေအထားကို ဆာဗေး အရင်ဆင်းပြီးမှ အဲဒီအပေါ်မှာ လျှောက်လွှာ အတည်ဖြစ်မဖြစ် ကြည့်မှာပါ" ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
Broadband WiMAX အင်တာနက်လိုင်းသည် ADSL Broadband အင်တာနက်လိုင်းကဲ့သို့ တယ်လီဖုန်းလိုင်း တပ်ဆင် အသုံးပြုရန် မလိုအပ်သော်လည်း သုံးစွဲသူများကြောင်း သိရသည်။
"ADSL လိုင်းနဲ့အတူတူပါဘဲ။ ADSL လိုင်းက ဖုန်းကောင်းရင် လိုင်းပိုကောင်းတတ်ပါတယ်။ WiMAX ကျတော့ ရာသီဥတုအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုထိ complain လုပ်တာတော့ မရှိသေးဘူး" ဟု အရောင်းဝန်ထမ်းက ပြောသည်။
Outdoor Unit တခုတည်း ရှိရုံဖြင့် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သော BroadBand WiMAX ဆက်သွယ်မှုစနစ်အား အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်ရုံသာမက ပြည်တွင်းခေါ်ဆိုနိုင်သော သီးခြား VOIP ဖုန်းလိုင်း တခုကိုပါ ဂဏန်း ၇ လုံး တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
တယ်လီဖုန်း ရှိထားရန် မလိုသော broadband ၀န်ဆောင်မှုကို အရင်က ISP များဖြစ်သည့် ပုဂံ(မြန်မာတယ်လီပို့) နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ ၀န်ဆောင်မှု ပေးခဲ့သော်လည်း outdoor unit များ၏ သက်တမ်း ကျော်လွန်လာသဖြင့် အသုံးပြုရသည်မှာ အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
(ရန်ကုန်ရှိ သတင်းထောက်တဦးက ပေးပို့ချက်ကို နန်းဒေ၀ီ မှ ဖြည့်စွက် ရေးသားထားသည်)
နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်ခွါရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ပိုများလာ
ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 23 2008 19:04 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ လာမည့်နှစ်များတွင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်၍ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပိုမိုများပြားလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်း နိုင်ငံသားများအဖွဲ့” (IMO) က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
အရှေ့တောင်အာရှအတွင်း ရွှေ့ပြောင်း နိုင်ငံသားများနှင့် ပတ်သက်၍ ယုံကြည် ကိုးစားလောက်ဖွယ် စာရင်းဇယား ရရှိရန် ခက်ခဲသော်လည်း စီးပွားရေး မပြေလည်မှုများက မြန်မာနိုင်ငံသားများကို နိုင်ငံတကာ နယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး စားဝတ်နေရေး ပိုပြေလည်မည့် နေရာကို ရှာကြစေရန် ဆက်လက် “တွန်းပို့” နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုတပတ် တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် IMO ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
"တိုင်းပြည်၏ လက်ရှိ လုံလောက်သော အခြေခံအဆောက်အဦ မရှိခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပါးသည့် အလုပ်တပ်ဖွဲ့သာ ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် နောက်ထပ် စီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အဟန့်အတား ဖြစ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရရှိရန် အလားအလာမှာ အကန့်အသတ်နှင့်သာ ရှိနေခြင်းကြောင့် လူအများအပြားကို အခြားနိုင်ငံများတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေရန် အားပေးသလိုဖြစ်နေသည်" ဟု IMO က ဆိုသည်။
မကြာသေးခင် နှစ်များအတွင်း နိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ခွါလာခဲ့သူ အရေအတွက်မှာ ၃ သန်းခန့် ရှိမည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းသည်။
ဤသို့ တိုင်းပြည်ပြင်ပ ထွက်စေရန် “တွန်းပို့သည့် အချက်များ” သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုများနေမည်ဟု မျှော်လင့်ရကာ၊ မြန်မာတွင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု နှေးကွေးနေခြင်းကြောင့် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်စာလျှင် ဝင်ငွေကွာဟမှုက ပို၍ ကြီးမား လာဦးမည်ဟုလည်း ဆိုထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် တဦးချင်းဝင်ငွေတွင် မြန်မာနိုင်ငံထက် ၆ ဆ များနေခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အဓိက ထွက်ခွါရာနိုင်ငံ ဖြစ်မြဲ ဖြစ်နေသည်။ ယခင် အလားအလာများနှင့် မတူဘဲ ယခုအခါတွင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားဦးရေက နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူများထက် ပို၍များနေသည်ဟု IMO က ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများတွင် ဤသို့ ရွှေ့ပြောင်း ထွက်ခွါသူများအနက် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အရေအတွက် ပိုများလိမ့်မည်ဟုလည်း တွက်ဆထားသည်။ တရားဝင် စာရင်းဇယားများအရ ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း နိုင်ငံသားများတွင် အမျိုးသမီးမှာ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် တိုင်းပြည်တွင်းမှ ရွှေ့ပြောင်း ထွက်ခွါသူ အများဆုံးရှိသော မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၂ သန်းခန့် ရှိနေသည်။ ယင်းတို့ထဲမှ အများစုမှာ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် ဘာမျှမရှိဘဲ တရားမဝင်သော်၎င်း၊ မည်သည့်လက်မှတ်မှ မရှိဘဲသော်၎င်း နေကြရသည်။
တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမှု မရှိခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်း နိုင်ငံသားများကို ခံစားခွင့် အခွင့်အရေးများ ပေးအပ်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ယင်းတို့အနေဖြင့် စော်ကားခံရခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်း စသည့် အန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သူတို့ နေထိုင်ရသော ဝန်းကျင် အနေအထားမှာလည်း ကူးစက်ရောဂါ ပိုမို ကူးစက် ဖြစ်ပွားခံရနိုင်ခြင်း ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များ ရှိနေသည်။
ထို့ပြင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာအာဏာပိုင်များအကြား ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးခြင်းကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ခန့်မှန်းခြေ ၂ သန်းခန့်မှာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပညာသင်ကြားခွင့် အပါအဝင် အခြေခံ လူမှုစောင့်ရှောက်မှုများ မရှိဘဲ ဖြစ်နေသည်။
အဆိုပါ မြန်မာများအနက် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် ရရှိထားသူများမှာ ၂ဝဝ၇ နှစ်လယ်အထိ ၄၈၅၉၂၅ ရှိသည်။ ယင်းအရေအတွက်သည် အိမ်ရှင်နိုင်ငံက လက်ခံခွင့်ပြုခဲ့သော စုစုပေါင်း အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်၏ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အများစုသော ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများမှာ ငါးအအေးခန်းစက်ရုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်ဖေါ်များအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အနာဂါတ် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ချို့တဲ့မှုကြောင့် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား လျှောက်ထားမှု ကနဦးအဆင့် လိုအပ်ချက်အရ ကလေးသူငယ်ပေါင်း ၇၇ဝဝဝ ၏ လျှောက်လွှာများကို စိစစ်ပြီး ဖြစ်သည်။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ကြုံနေရသော အန္တရာယ်ကို အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် အလုပ်သမား ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုကြီးကြပ်ရန်၊ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူ သဘောတူညီချက်များကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ရွှေ့ပြောင်း လူဦးရေများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် အချို့သော ကျား-မ ဆိုင်ရာ အကဲဆတ်သည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ကိုင်တွယ်ရန်တို့ကို IMO အဖွဲ့ကြီးက အကြံပြု တင်ပြထားသည်။
ဒေသတွင်း ရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ နိုင်ငံတွင်း ကျန်ရှိခဲ့သည့် ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် မိတ်ဆွေများထံ လွှဲပြောင်းပေးပို့ငွေမှာ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်အတွင်း ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁၁ရ သန်း ရှိသည်။
ဒေသတွင်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ နိုင်ငံရင်းသို့ တရားဝင် ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးပို့သည့် ငွေမှာ ၁၉၉ဝ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ ၄ ဒဿမ ၂ ဘီလျံရှိရာမှ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၅ဝ သို့ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
အန်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဌ ကျန်းမာရေး ပြန်ကောင်း
ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 23 2008 17:14 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ရွှေ၏ ကျန်းမာရေး ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာပြီ ဖြစ်သည်။
အသက် ၉၁ ကျော် အရွယ်ရှိ ဦးအောင်ရွှေသည် ပြီးခဲ့သည့်လ ၂၇ ရက်နေ့က အန်အယ်လ်ဒီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၂၀ ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မိမိနေအိမ်တွင် ကျန်းမာရေး မကောင်းသဖြင့် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
"ရိုးရိုးတုတ်ကွေး ဖြစ်တာပါ။ အခု ကျန်းမာရေး ပြန်ကောင်းလာပါပြီ။ အိမ်မှာပဲ၊ ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ အားပြန်မွေးရတာပေါ့လေ" ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဦးအောင်ရွှေ၏ နေအိမ်ကို မဇ္ဈိမက တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ကာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို မေးမြန်းကြည့်ရာ မိသားစုဝင်တဦးကလည်း ကျန်းမာရေး ပြန်ကောင်းနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါတီအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ် ဦးလွင်ကတော့ ကျန်းမားရေး မကောင်းသဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် ၂ လခန့်ကတည်းက ပါတီတွင် ခွင့်တိုင်ထားခဲ့သည်။
ဦးလွင်က "အန်ကယ် လေဖြတ်ထားတာကတော့ ၁၇ နှစ်လောက်ကလေ။ အခုဟာက ကျန်းမာရေးက သိပ်ပြီး မတိုးတက်လာတော့ နည်းနည်း စိုးရိမ်ကြရတာပေါ့။ အသက်ကလည်း ရလာတာကိုးဗျ။ လမ်းတောင် ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်တော့ဘူး။ ရုံးကိုတောင် မသွားဖြစ်ဘူး" ဟု ပြောသည်။
ဦးအောင်ရွှေသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း အန်အယ်လ်ဒီနှင့် မဟာမိတ်ဖြစ်သော မျိုးချစ် ရဲဘော်ဟောင်းများအဖွဲ့ ပါတီ၏ ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ၊ အန်အယ်လ်ဒီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးတို့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံရပြီးနောက် အန်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဦးအောင်ရွှေသည် ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ဘက်လိုက်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ကာ တပ်မတော်က သူ့အား အနားပေးခဲ့ပြီး၊ စစ်သံမှူးအဖြစ် ပြောင်းလဲ ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။
အတွင်းရေးမှူး ဦးလွင်သည် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ် နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံတော် ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင်ကာလနှင့် ထို့နောက်ပိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် BIA, BDA, PBF အမည်ရ မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်အပြင် ဂျပန်တော်ဝင် စစ်အကယ်ဒမီမှ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၅၄ ခုနှစ်အထိ ဗြိတိသျှ တော်ဝင် စစ်အကယ်ဒမီတွင် စစ်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
မြန်မာအမျိုးသမီး သတင်းစာဆရာတဦးကို မီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းတခုမှ ဂုဏ်ပြု
ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 23 2008 12:57 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ရံဖန်ရံခါ သူမ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်သည်အထိ ပြုလုပ်ပြီး စစ်အစိုးရက တိုးမြှင့် ဖိနှိပ်နေသည့်ကြားမှ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း သတင်းများကို ထူးထူးချွန်ချွန် ပေးပို့နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် “၂ဝဝ၈ ခုနှစ် သတင်းစာဆရာ ရဲစွမ်းသတ္တိဆု” ကို မြန်မာအမျိုးသမီး သတင်းစာဆရာ တဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်အေးအေးဝင်းအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး မီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း (IWMF) က အင်္ဂါနေ့က ပေးအပ်ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်လိုက်သည်။
"ကျမရဲ့ မိသားစုကို ဒုက္ခပေးမှာ စိုးရိမ်ရလို့ ဒီဆုကို ကိုယ်တိုင် အခမ်းအနားမှာ တက်ပြီး မယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီဆုကိုရတဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါတယ်" ဟု အေပီသတင်းထောက် ဒေါ်အေးအေးဝင်းက ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
"ကျမကိုယ်တိုင် မတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့ ကျမကိုယ်စား ကျမရဲ့ မိတ်ဆွေတွေက ဒီအခမ်းအနားကို တက်ကြတယ်ကြားရလို့ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပါတယ်" ဟု သူမက ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ ဤဆုကို သူမကိုယ်စား နယူးယောက်ရှိ အေပီသတင်းဌာန၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အယ်ဒီတာ John Daniszewski က လက်ခံ ရယူခဲ့ပါသည်။
Daniszewski က ဖတ်ကြားသွားခဲ့သော ကြေငြာချက်တွင် ဒေါ်အေးအေးဝင်းက "ညသန်းခေါင်ကျော် အိမ်တံခါး လာခေါက်သံများသည် ကျမတို့ ဘဝများကို ထိတ်လန့် ချောက်ချားစေပါသည်။ သို့သော် အမှန်ပြောခြင်းကို ပါးစပ်ပိတ် ထားလိုသူများအား စိန်ခေါ်လိုသည့် သတင်းစာဆရာများ အတွက်တော့ ဤအန္တရာယ်များကို ရင်ဆိုင်ရမည်သာ ဖြစ်သည်ဟု ကျမ ယုံကြည်ပါသည်" ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
"ကျမ ဒီအလုပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း အမှန်တွေ ပြောချင်လို့ပါ၊ အဖိနှိပ်ခံတွေရဲ့ နောက်က ရပ်ချင်လို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမ ဒီသတင်းစာဆရာ အလုပ်အပေါ် အထုံ ပါရမီ ပါလာခဲ့တာရယ် နဲ့ ကျမရဲ့ အဖေကြောင့်ပါ ဘဲ" ဟု ဒေါ်အေးအေးဝင်းကပြောပါသည်။
အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ်ရှိ မြန်မာအမျိုးသမီး သတင်းစာဆရာမသည် သတင်းစာပညာကို ဝါရင့်သတင်းစာဆရာ သူ့ဖခင် ဦးစိန်ဝင်းထံမှ လေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီး၊ သူ့ဖခင်သည် အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ် ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။
သူမ၏ သတင်းထောက်ဘဝ အစောပိုင်းကာလများတွင် ကျောင်းသားများ ဦးဆောင်သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ဒီမိုကရေစီ လိုလားတောင်းဆိုသည့် လူထုအုံကြွမှုကြီးကို သတင်းလိုက်ခွင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ သို့သော် တဦးတည်းသော အမျိုးသမီး သတင်းထောက် ဖြစ်နေသည့် သူမကို စစ်အာဏာပိုင်များ သတိမထားလိုက်မိသည့်အချိန်မှာ သိပ်မကြာလိုက်ပါ။
မကြာခဏပင် သူမအိမ်မှာ အရပ်ဝတ်ရဲများ၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေး စုံထောက်များနှင့် ခြေချင်းလိမ်နေသည်။ သူမ တယ်လီဖုံးမှာ ကြားဖြတ်နားထောင်ခြင်း ခံရသည်။ အာဏာပိုင်များ၏ နှောင့်ယှက်ခြင်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သူမခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၇ နှင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်များတွင် နယ်မြေခံ စစ်ထောက်လှမ်းရေးရုံးသို့ ခေါ်ယူစစ်ကြော မေးမြန်းခံခဲ့ရသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလများအတွင်း ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း စွန့်စွန့်စားစား သတင်းလိုက်ခဲ့သည်။ စစ်သားများက ဆန္ဒပြသူများကို ပစ်ခတ်ပြီး လမ်းဘေးမှ ရပ်ကြည့်နေသူများကို ရိုက်နှက်နေချိန်တွင် သူမ ထိုလမ်းမများပေါ် လျှောက်သွားနေခဲ့သည်။
အစိုးရ၏ အာဘော်များကို ရောင်ပြန်ဟပ်လေ့ ရှိသည့် သုံးသပ်ချက်များ၊ ဆောင်းပါးများ ပါတတ်သည့် အစိုးရပိုင် သတင်းစာများကလည်း ဒေါ်အေးအေးဝင်းကို ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအာဘော် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက တကြိမ်တွင် “နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေးချက်” ဟုဆိုကာ သူမအနေနှင့် သတင်းများ ပေးပို့ခြင်းကို ရပ်တန်းက ရပ်ရန်နှင့် မရပ်ပါက သူတို့က သတ်ပစ်ရလိမ့်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ သတင်းစာတွင် သူမအမည်ကို ဖေါ်ပြထားခြင်း မပြုသော်လည်း အနောက်မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေသည့် အမျိုးသမီး “ပုဆိန်ရိုး” အဖြစ် သူမကို ရည်ညွှန်းဖေါ်ပြခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာန တခုအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် တဦးတည်းသော အမျိုးသမီး သတင်းထောက်တဦးဖြစ်သူ ဒေါ်အေးအေးဝင်းကမူ ဤခြိမ်းခြောက်မှုသည် သူမကို ရည်ညွှန်းမှန်း သိပါသည်။
ဒေါ်အေးအေးဝင်းသည် IWMF ၏ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွက် သတင်းစာဆရာ ရဲစွမ်းသတ္တိဆုကို အခြားအမျိုးသမီး သတင်းစာဆရာမ ၂ ဦးဖြစ်သော အာဖဂန်သတင်းဌာန Pajhwok ၏ မန်နေဂျင်းအယ်ဒီတာ Farida Nekzad၊ ဆိုက်ပရပ်သတင်းစာ Yeniduzen ၏ စူးစမ်းလေ့လာ သတင်းစာပညာ သတင်းထောက် Sevgul Uludag တို့နှင့် အတူ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ တင်းကြပ်လှသော ဆင်ဆာဥပဒေများအကြား ခဲယဉ်း ပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန် တိုက်ပွဲဝင်နေရသော အခြား မြန်မာသတင်းစာဆရာ အများအပြားကဲ့သို့ ဒုက္ခနှင့် အခက်အခဲများ ထပ်တူကြုံနေရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီး သတင်းစာ ဆရာမတဦး ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် ဆင်ခြေဖုံး သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သော လူသတ်မှုတခုအကြောင်း သတင်းရေးသား ဖေါ်ပြမိခဲ့သည့် အတွက် တလကျော်ကြာ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည့် ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဖလားဝါး (Flower) အပတ်စဉ်ဂျာနယ်၏ သတင်းထောက်ချုပ် ကိုစောမြင့်သန်းကို တနင်္လာနေ့က စစ်အစိုးရက ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
သို့သော် ကိုစောမြင့်သန်းသည် အာဏာပိုင်များ အတင်းအကြပ် ထိုးခိုင်းသည့် ကတိခံဝန်တခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရသည်။ အလားတူပင် အောက်တိုဘာလထုတ် လစဉ် ထုတ်ဟာသမဂ္ဂဇင်း “ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်” ကို သုံးပုံတပုံနီးပါး စစ်အစိုးရ၏ ဆင်ဆာအဖွဲ့က ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်သည့်အတွက် မဂ္ဂဇင်းထုတ်ရက်ကို ၂ လခန့် နောက်ဆုတ်လိုက်ရသည်။
ကမ္ဘာမှာ ကြွေးမြီဆူနာမီဘေးဆိုးကြီး ဆိုက်နေပြီဟု ဂရင်းစပန်ပြော
NEJ/၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အစပြုပြီး ကမ္ဘာတ၀ှမ်း ငွေကြေးဈေးကွက်များ ကြုံတွေ့နေရသည့် အကျပ်အတည်းကိစ္စသည် ရာစုနှစ်တခုတွင် တကြိမ်သာကြုံရသည့် ကြွေးမြီဆူနာမီဘေးဆိုးကြီးနှင့်တူသည်ဟု အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌဟောင်း အယ်လင်ဂရင်းစပန်က ပြောကြားသည်။
အမေရိကန်လွှတ်တော်ကြားနာပွဲတွင် အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌဟောင်း အယ်လင်ဂရင်းစပန်က ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရသည့် ငွေကြေးအကျပ်အတည်းအခြေအနေအရ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း သိသိသာသာ ထိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် အိမ်ဈေးကွက်နလံထူဖို့မှာလည်း လပေါင်းများစွာ ကြာလိမ့်မည်ဟုပါ မစ္စတာ ဂရင်းစပန်က ပြောသည်။
တိုးတက်သည့် နိုင်ငံအချို့ စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်တော့မည် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်နေပြီဟု စိုးရိမ်နေချိန်တွင် အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌဟောင်းက ကြွေးမြီဆူနာမီဘေးဆိုးကြီး ဆိုက်နေပြီဟု ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အယ်လင်ဂရင်းစပန် ပြောသည့်အချိန်တွင် အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်အာရှနှင့် အာရှပစိဖစ်နိုင်ငံများမှ ငွေကြေးဈေးကွက်များ အကျပ်အတည်းဖြစ်နေချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။
အယ်လင်ဂရင်းစပန်သည် ထင်ရှားသည့် စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌအဖြစ် ၁၉၈၇ ခုမှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အစောပိုင်း သို့မဟုတ် ၂၀၀၈ ခုမတိုင်မှီ အမေရိကန်နိုင်ငံ စီးပွားကပ်ဆိုက်နိုင်သည်ဟု အယ်လင်ဂရင်းစပန် ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ပြောခဲ့သည်။ ယနေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကြုံတွေ့နေရသည့် ငွေကြေးအကျပ်အတည်းအတွက် အယ်လင်ဂရင်းစပန်မှာ တာဝန်ရှိသည်ဟု မကြာခင်က နိုဘဲဆုဆွတ်ခူးခဲ့သူ အမေရိကန်စီးပွားရေးပညာရှင် ပေါလ်ခရွတ်မန်းက စွပ်စွဲသည်။
(၂၀၀) ကျပ်တန်ထီရောင်းမည်၊ အခွန် နှစ်ဆတိုးရရန်ရည်ရွယ်
NEJ/ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
အောင်ဘာလေ ထီတစောင် ကျပ် (၂၀၀) နှုန်းဖြင့် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ရောင်းချရခြင်းသည် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုအခွန်ငွေ နှစ်ဆတိုး ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနရုံးမှ ဦးစီးအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “လက်ရှိ ကျပ် (၁၀၀) နဲ့ ရောင်းနေတဲ့ ထီလက်မှတ်တွေကနေ တနှစ် ပျှမ်းမျှအခွန် ကျပ်ငွေ (၁၂) ဘီလီယံကျော်ရနေတယ်။ အဲဒါ လာမယ့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စပြီး ကျပ်ငွေ (၂၄) ဘီလီယံကျော်ရအောင် စီမံကိန်းချပြီး လုပ်တာဖြစ်တယ်” ဟုပြောသည်။
လာမည့် ဒီဇင်ဘာ (၁) ရက်မှ စတင်ကာ အောင်ဘာလေထီတစောင်ကို ကျပ် (၂၀၀) ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခု ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြသည်။
ဇန်န၀ါရီတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အောင်ဘာလေထီ အကြိမ် (၂၄၀) မြောက်မှစ၍
သိန်း ၁,၀၀၀ (၁) ဆု ၊ သိန်း ၅၀၀ (၁) ဆု၊ သိန်း ၃၀၀ (၃) ဆု၊ သိန်း၂၀၀ (၅) ဆု၊ သိန်း ၁၀၀ (၁၇) ဆု အသီးသီးချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိ ထီအက္ခရာ (၃၆) လုံး ရောင်းချနေရာမှ အက္ခရာ အလုံး (၃၀) သာ ရောင်းချမည်ဟုလည်း ကြေညာထားသည်။
လောလောဆယ် ကျပ် (၁၀၀) တန် ထီလက်မှတ်စနစ်တွင် အမြင့်ဆုံး ဆုကြေးငွေသည် ကျပ် သိန်း (၅၀၀) ဖြစ်ပြီး ရှေ့နှစ်တွင် ကျပ်သိန်း (၁,၀၀၀) သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းသည် တရားမ၀င် ချဲထီလောကကို တိုက်ဖျက်ရန်ဖြစ်သည်ဟု အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဒါက တရားမ၀င်တဲ့ ချဲထီလောကကို တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့ ဆုငွေကို သိန်း (၁,၀၀၀) လို့ သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ ထီအက္ခရာကိုလည်း လျှော့ထားတယ်လေ။ ပေါက်အား များအောင်လို့ပါ” ဟု ပြောသည်။
ထီလုပ်ငန်းရှင်များကမူ ယခုကဲ့သို့ ထီဆုတိုးလိုက်သည့်အတွက် အပိုဆုပေးမှုများ ပျောက်သွားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းပြောဆိုကြသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံအောင်ဘာလေ သိန်းဆုဌာနခွဲက ထီဆိုင်ကြီးများကို (၁၁) စောင်ပါ ထီ (၁) အုပ်ကို ကျပ် (၁,၀၀၀) နှုန်းဖြင့် လက်ကားရောင်းချပေးပြီး ထီဆိုင်များက (၁) စောင်လျှင် ကျပ် (၁၀၀) နှုန်းဖြင့် ပြန်ရောင်းပါက ထီ (၁) အုပ်ကုန်တိုင်း ကျပ် (၁၀၀) အမြတ်ရမည့်သဘောဖြစ်သည်။
သို့သော် ထီဆိုင်ကြီးများက ၎င်းတို့ဝယ်သည့် ထီလက်မှတ်များကို အက္ခရာစုံတွဲခြင်း၊ မင်္ဂလာစုံတွဲ တွဲခြင်းတို့ပြုလုပ်ပြီး ထီ (၁) စောင် ကျပ် (၁၃၀) ခန့်မှ ကျပ် (၁၅၀) အထက် နှုန်းထားအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြန်ရောင်းချကြသဖြင့် အမြတ်အစွန်း ကြီးမားစွာ ရရှိကြသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း အစိုးရသတ်မှတ်သည့် ကျပ်သိန်း (၅၀၀) ဆု ပေါက်ခဲ့ပါက ထီဆိုင်ကြီးများက နောက်ထပ် ကျပ် သိန်း (၅၀၀) ခန့် အပိုဆောင်းပြီး ကျပ် သိန်း (၁,၀၀၀) ခန့်အထိ ပေးကြသည်။
သို့သော် အစိုးရက ထီဆုကြီးကို သိန်း (၁,၀၀၀) အထိ တိုးမြှင့်တော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် အပိုဆုများမပေးတော့ဟု ထီလောကတွင် သတင်းပြေးနေသည်။
၀ါရင့်ထီကုန်သည်တဦးက “သိန်း (၁,၀၀၀) ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် ထီထိုးသူတွေ အတွက်တော့ သတင်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပိုဆုတွေ မပေးတော့ဘူးလို့ သတင်းတွေဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ထီဈေးကွက် ကျသွားနိုင်တယ်” ဟုပြောသည်။
မြန်မာပြည်တွင်း၌ အစိုးရအောင်ဘာလေ ထီအပြင် ထိုင်းအိုင်တီဗွီ ချယ်နယ်မှ တနေ့နှစ်ကြိမ် ဖော်ပြသည့် အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်း နောက်ဆုံးဂဏန်း နှစ်လုံးကို လောင်းကစားသည့် (၂) လုံးထီ၊ တလ နှစ်ကြိမ်ဖွင့်လှစ်သည့် ထိုင်းထီကို အခြေခံလောင်းကစားသည့် ချဲထီတို့လည်း ပျံ့နှံ့နေပြီး ယခုနောက်ပိုင်း စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အောင်ဘာလေထီကိုပါ ထိုးနေကြသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
ယင်းလောင်းကစားမှုများကို နယ်မြေခံရဲများက ပုံမှန်ဆက်ကြေးကောက်ယူကာ ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
နေပြည်တော်ရဲ့ ပိတောက်မြေရေဒီယိုက လေလှိုင်းနဲ့ တိုက်ပြီ
အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈
နံနက်ခင်း မင်္ဂလာအချိန်ခါ သတင်းသံသာအဖြစ် ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ အာရ်အက်ဖ်အေနဲ့ ဒီဗွီဘီတို့ အားပေးသူ မြန်မာပရိသတ်အပေါင်းခင်ဗျာ နေပြည်တော်က ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ပိတောက်မြေ ရေဒီယို လေလှိုင်းရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မရှုမလှဖြစ်နေကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ဧပြီလကတည်းက နေပြည်တော်ရဲ့ လျို့ဝှက်တဲ့နေရာက မနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ် ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနများထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်နဲ့ ကိုက်ပြီး စစ်အစိုးရအလိုတော်ရိ သတင်းများနဲ့ ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနများကို ပြန်လည် တုံပြန်တိုက်ခိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ရာမှာ ယခုအချိန်မှာတော့ ပြည်ပအသံလွှင့်လေလှိုင်းများကိုပါ ပူးကပ်ပြီး နားထောင်သူများကို အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အထိ ဖြစ်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ဥပမာ ဘီဘီစီက ဆင်းရဲတဲ့သတင်းလွှင့်နေရင် ဘေးက အသံကြောင်နဲ့ ဗမာပြည်မှာ ငတ်သေတဲ့မသာ မရှိဘူးလို့ အသံတွေ ၀င်လာတယ်။ နားထောင်တဲ့သူက လိုင်းမကြည်တော့ ဟိုလှည့် ဒီလှည့်လုပ်။ သူတို့က ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြည်တွင်းသတင်းတွေ လွှင့်နေတော့ အဟုတ်မှတ်လို့ နားထောင်မိ။ နည်းနည်းကြာတော့မှ သန်းရွှေကြီး အကြောင်း၊ စွမ်းအားရှင်အကြောင်းတွေ အမွှန်းတင်နေတာတွေ ကြားမှ ပိတောက်မြေပဲ ဆိုပြီး မအေ နှမ ကိုင်တုတ်မိတော့တာကိုး …”
လို့ ပရိသတ်တယောက်က သူ့အဖြစ်ကို ပြောပြပါတယ်။
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဗိုလ်ကျော်ဆန်းက မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လေလှိုင်းပေါ်ကနေ အသံလွှင့်လှိုင်းများကို ပူးကပ်တာတွေ၊ တမင် တိုက်ပြီး လွှင့်တာတွေနဲ့ လုပ်တာဟာ တရားနည်းလမ်းကျကျ ယှဉ်ပြိုင်ဖြေရှင်းတာ မဟုတ်ဘဲ ကောက်ကျစ်တဲ့ အောက်လမ်းနည်း သုံးတာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်တွင်းက စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက သုံးသပ်ပြပါတယ်။
“ပြည်ပက သတင်းစာစောင်တွေ ကိုင်ဆောင်ရင် ဖတ်ရင် ဖမ်းတယ်၊ ထောင်ချတယ်။ တရားမ၀င် စာရွက်စာတမ်း ကိုင်ဆောင်မှု၊ ဟုတ်လား။ အင်တာနက် ၀က်ဆိုက်တွေကို ပိတ်တယ်။ ခိုးပြီး ကျော်ခွပြီး ကြည့်ရင် ဖမ်းမယ်၊ ဆီးမယ် စသည်ဖြင့် ခြိန်းခြောက်တယ်။ သူများဆိုက်တွေကို တိုက်ခိုက်တယ်။ ဖျက်ဆီးတယ်။ သူတို့ သတင်းစာတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ စာစောင်တွေ၊ ဘလော့တွေ ၀က်ဆိုက်တွေကနေ အတိုက်အခံတွေကို တိုက်ခိုက် စော်ကား ၀ါဒဖြန့်တယ်။ ပြည်သူကိုတော့ ဟိုက ဘာပြန်ပြောလဲ ဆိုတာကို နားထောင်ခွင့်၊ ကြားခွင့် မပေးဘူး။ အခု တိုက်ရိုက်လေလှိုင်းကနေပြီးတော့ သူများ လွှင့်တာတွေကို လိုင်းပူးတာတို့၊ နှောက်ယှက်တာတို့ လုပ်လာပြီ။ ဒီလို လုပ်နေတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံဆိုတာ ပြည်သူတွေအတွက် သချိူ င်္င်းကုန်းမှာ တွင်းတူးပြီး သေဖို့သာ ရှိတဲ့ မြေပုံပဲ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသာ ပြီးလို့ကတော့ မတွေးရဲစရာပဲ …”
ဟု ပြည်တွင်း စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ မီဒီယာသမားများကို စစ်အစိုးရက မက်လုံးမျိုးစုံပေး သိမ်းသွင်းနေပါတယ်။ သတင်းစာထုတ်ချင်သလား၊ ၂၀၁၀ ပြီးလျင် စိတ်ကြိုက် သတင်းစာမျိုးစုံ ပေးထုတ်မယ်လို့ စစ်အစိုးရက စရန်သတ်နေပါတယ်။ အမျိုးသားရေးကို မျက်ခြေမပြတ်ကြဖို့လိုတယ်လို့ သတင်းစာဆရာကြီးတဦးက သတိပေးစကား ပြောပါတယ်။ စစ်အစိုးရ မျက်နှာ၊ အာဏာရှင်မျက်နှာကို ကြည့်မိရင်၊ သူတို့ကို မျက်နှာလိုက်မိရင်၊ ပြောရေးဆိုခွင့် အသိပညာဆည်းပူးခွင့် အပိတ်ခံထားရတဲ့ အဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ မျက်နှာတွေကို မင်းတို့ မမြင်နိုင်တော့ဘဲ ငွေကြေး၊ အာဏာ၊ သြဇာတွေနောက် ယစ်မူးသာယာပြီး အာဏာရှင်တွေရဲ့ “လ်ိုင်းသွင်း”တာခံကြရတဲ့ “မီဒီယာပိုင်းလုံး”တွေ ဖြစ်ကုန်ကြလိမ်မယ်လို့ ပြောလိ်ုက်ပါတယ်။ (သူပြောတာက - “စာနယ်ဇင်း ဖာခေါင်း၊ ဖာသည်”တွေ လို့ ပြောတာပါ၊ ယဉ်ကျေးအောင် ပြင်ပြီး ပြောတာ၊ အခုတော့ အရင်းအတိုင်းပဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်)
(ပိတောက်မြေ ရေဒီယိုအကြောင်းကို ဒီဝက်ဆိုက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ - http://www.democraticforumburma.org/art_yoma_maung.html )
အာရှနှင့်အီးယူခေါင်းဆောင်များက မြန်မာစစ်အစိုးရအား ဖိအားပေးသင့်
HRW/ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ကျင်းပရန်ရှိသည့် အာရှ- ဥရောပ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရအား ၎င်း၏လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကို တိုးတက်စေရေး လုပ်ဆောင်ရန် ဖိအားပေးသင့်ကြောင်း လူ့အခွင့် အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Human Rights Watch (HRW) က ယနေ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်။ HRW မှ အာရှဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ ဘရက်အဒမ်က “ASEM အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့နဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးဖို့ အခွင့်အရေးတရပ် ရှိနေပါတယ်။ ASEM ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ်မှာ ဆိတ်ဆိတ်နေလို့ မသင့်ပါဘူး” ဟုပြောသည်။
ယခုအစည်းအဝေးသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ညှိနှိုင်းကြိုးစားမှု မအောင်မမြင်ဖြစ်ပြီးနောက် စစ်အစိုးရကို အရေးပါသည့် ဖိအားပေးမှုမျိုးလုပ်နိုင်သည့် အစည်းအဝေးဖြစ်ကြောင်းလည်း HRW က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို အာရှနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများ ပူးတွဲဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်သည့် (၇) ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပ အစည်းအဝေး (ASEM) ကို ပေကျင်းမြို့တွင် ယခုလ (၂၄-၂၅) ရက်များ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်အပါအ၀င် (၄၅) နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွင် “လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်သည့် တိုးတက်မှု” တစုံတရာ ရှိရမည်ဟု တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီ၏ ယခုနှစ် မြန်မာခရီးစဉ်အတွင်း ထူးခြားသည့် တိုးတက်မှုတစုံတရာမရရှိခဲ့ပေ။ ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လတွင် ထိပ်တန်းမြန်မာခေါင်းဆောင်များက မစ္စတာဂမ်ဘာရီနှင့် တွေ့ဆုံရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်သာမက ၎င်းသည်မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်သည်ဟုပင် စွပ်စွဲခံရသည်။
မေလအတွင်းကလုပ်ခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲကြောင့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအတွက် လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်ကူလုပ်ငန်းများ နှေးကွေးခဲ့ရကြောင်း၊ အဆိုပါ ဥပဒေသည်လည်း စစ်အစိုးရသက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ကြောင်းတို့ကိုလည်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားသည့် တားဆီးပိတ်ပင်မှုများအရ နအဖ၏ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် “ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အာမခံနိုင်သည့် နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမလုပ်ဘဲ” အလည် အပတ်ဖြစ်စေ (သို့) နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ ဥရောပနိုင်ငံများသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်မရှိပေ။
ယင်းသို့တားဆီးထားသော်လည်း ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းကို ယမန်နှစ် ASEM အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် Hamburg သို့လာရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ဥရောပသမဂ္ဂက အစည်းအဝေးကာလအတွင်း ဦးဥာဏ်ဝင်း နှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းများ တိုးတက်မှုမရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယခုကျင်းပမည့် ASEM အစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံကို အဓိကကျားကန်ပေးနေသော အိမ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံအပြင် အိန္ဒိယ၊ စင်ကာပူတို့အပါအ၀င် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုလည်း ဖိအားပေးရန် HRW အဖွဲ့ကြီးက ဥရောပ သမဂ္ဂအား တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ထို့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ပျှမ်းမျှ (၂,၀၀၀) ကို ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းလွှတ်ပေးပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ စုဝေးခွင့်၊ ဖွဲ့စည်းခွင့်များအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် တားဆီးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးရန်၊ လူမျိုးစုများအပေါ် တိုက်ခိုက်နေမှုများကို ရပ်တန့်ပြီး ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်မှုများအပေါ် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန်၊ အသက် (၁၈) နှစ်အောက် ကလေးများကို စစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းနေမှုကို ရပ်တန့်ပြီး စုဆောင်းထားသည့် ကလေးစစ်သားများကိုလည်း ပြန်လွှတ်ပေးရန် နအဖအား ဖိအားပေးရေးအတွက် အာရှနှင့် ဥရောပခေါင်းဆောင်များကို လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (HRW) ကြီးက ယနေ့ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အာရှစတော့ခ်ဈေး ထိုးကျ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအကြား စိုးရိမ်မှုပိုလာ
Adaptation of Phil Mercer's Report in Burmese
ကမ္ဘာနဲ့အ၀န်း စီးပွားရေးအကျပ်ဆိုက်နေတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့
ခေါင်းဆောင်တွေ ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနေတဲ့ကြားကပဲ ငွေကြေးဈေးကွက် အခြေအနေတွေ
က စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေတွေမှာပဲ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်မယ့်
အခြေအနေမျိုးကို ဦးတည်သွားနေပြီလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူ ဒီကနေ့ဆိုရင်လည်း
အာရှဈေးကွက်က စတော့ခ်ရှယ်ယာဈေးတွေ နောက်ထပ် ကျဆင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ သြစတြေးလျ စတဲ့နိုင်ငံတွေက
ရှယ်ယာဈေးတွေလည်း ကျဆင်းခဲ့တဲ့အထိ စီးပွားရေးပြဿနာတွေ ကြုံနေရတာနဲ့
ပတ်သက်လို့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ဖီးလ် မာဆာ (Phil Mercer) ရဲ့ သတင်းပေးပို့
ချက်နဲ့အတူ နိုင်ငံတကာက အခြေအနေတွေကို ကိုအောင်လွင်ဦးက စုစည်းတင်ပြ
ပေးထားပါတယ်။ ကျဆင်းလျက်ရှိသော ဟောင်ကောင် ဟန်ဆန်းအညွှန်းကိန်း။
မှာ ဦးမော့လာခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အခု
မသွားသေးဘူးဆိုတဲ့ လက္ခဏာလို့ ဆိုရမှာပါ။
အာရှရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးအင်အားကြီးတခု ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း နစ်ကေး
(Nikkei) အညွှန်းကိန်းတွေဟာ ၂.၅% ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိပြဿနာတွေ
ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်ပပို့ကုန်တွေ အားနည်းလာမယ့် အခြေအနေတွေက စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမယ့်အဖြစ်အထိ ဆိုက်ရောက်တော့မှာလားဆိုပြီး စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူ အစောပိုင်းမှာတုန်းက ၇% နီးပါး အထိ လျော့ကျခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာလည်း ၂ ရက်ဆက်တိုက်အဖြစ် ဈေးတွေကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး
တော့ ASX အညွှန်းကိန်းဟာ ၄% ကျော်အထိ ကျခဲ့ပါတယ်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ
ကို ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ အကြီးအကျယ် အရှုံးပေါ်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တာ၊ ကမ္ဘာနဲ့
အ၀န်း စီးပွားရေးကျဆင်းလာတာတွေကို အခြေခံပြီး အခုလို ရှယ်ယာဈေးတွေ ထိုးကျ
လာခဲ့တာပါ။ ဒီလိုစီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ သြစတြေးလျနိုင်ငံက
ANZ ဘဏ်ဟာလည်း ၁၁ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမြတ်အစွန်းတွေ
လျော့ကျလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အစုရှယ်ယာ ဈေးကွက်တွေမှာ အခုလို အထိတ်
တလန့်ဖြစ်ပြီး ဈေးတွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ ANZ ဘဏ်ရဲ့ အလုပ်အမှု
ဆောင် အကြီးအကဲ မိုက်ခ် စမစ်သ် (Mike Smith) က စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"ဒေါင်း ဂျုံးစ် (Dow Jones) အညွှန်းကိန်းနောက်ကို သြစတြေးလျ စတော့ခ်ဈေးကွက်
က ဘာကြောင့် အရူးအမူး လိုက်ပါသွားရတာလဲဆိုတာကို ကျနော်တော့ အခုထိ
နားမလည်နိုင် ဖြစ်နေရပါတယ်။ ကျနော်တော့ သဘောကိုမပေါက်ဘူး။ အမေရိကန်က
ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေမှာ အမြတ်အစွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေ၊
စီးပွားရေးပုံစံတွေက သြစတြေးလျက ကော်ပိုရေးရှင်းတွေရဲ့ပုံစံ၊ စီးပွားရေးအလား
အလာတွေနဲ့ အများကြီးကွာပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီဈေးကွက်တွေ တခုနဲ့တခုကြားမှာ
မနေ့တုန်းကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဒေါင်းဂျုံးစ် အညွှန်းကိန်းတွေမှာ ၅%
နဲ့ကျဆင်းပြီး ဈေးပိတ်သွားခဲ့တာပါ။ ဒီနောက် အာရှမှာတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ ဆမ်ဆောင်း (Samsung) နဲ့ သံမဏိထုတ်လုပ်တဲ့ ပေါ့စ်ကို
(POSCO) တို့မှာ အစုရှယ်ယာဈေးတွေ ကျဆင်းသွားခဲ့တဲ့နောက် စတော့ခ်ဈေးတွေ
ဟာလည်း ၇% ကျော်နဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဟောင်ကောင် ဟန်ဆန်း
(Hang Seng) အညွှန်းကိန်းတွေဟာဆိုရင်လည်း ၃.၆% အထိ ဈေးကျခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီလို လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ကမ္ဘာတလွှား တခြား
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်မယ့် အလားအလာတွေကို မြင်နေရတဲ့
အတွက်ကြောင့်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေကြတာပါ။ မကြာခင်
အာရှတိုက်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ ရင်းနှီး
မြှုပ်နှံသူတွေက ပူပန်နေကြတာကိုတော့ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံသား
ဘဏ်အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသူရကို က အခုလိုပြောပြပါတယ်။
"အခု စီးပွားရေးကျတာ အမေရိကားက စဖြစ်နေပြီ။ ဥရောပမှာလည်း မနေ့က ၀န်ကြီး
ချုပ်က စပြောနေပြီ။ အင်္ဂလန်ကလည်း ပြောနေပြီ။ တဖြည်းဖြည်း အဲဒါတွေက ဘယ်ကို
ထိခိုက်မလဲဆိုတော့ အာရှက နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီထုတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ တရုတ်ပြည်၊
အိန္ဒိယ၊ ဗီယက်နမ် အဲဒါတွေ ထိခိုက်လာလိမ့်မယ်။ တရုတ်ပြည်ထိခိုက်ရင်
"ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တရုတ်ပြည်ကလိုတဲ့ ရေနံတို့၊ မြေကြီးကထွက်တဲ့ Minerals
တွေက သြစတြေးလျလိုနိုင်ငံတွေက ထွက်တာ။ တဖြည်းဖြည်း အဲဒါတွေ မထိခိုက်သေး
ဘူး။ အခု ရိုးရိုး သာမန်လူတွေကို အရင်ထိခိုက်မယ်။ ပြီးတော့မှ Export နိုင်ငံတွေ
ထိခိုက်လိမ့်မယ်၊ တရုတ်ပြည်တို့၊ အိန္ဒိယတို့၊ ဗီယက်နမ်တို့။ အဲဒါပြီးရင် သြစတြေးလျလို
ရေနံတို့ Minerals ထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေ ထိခိုက်ဦးမယ်။"
ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံသား ဘဏ်အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသူရကို ပြောပြ
အခုလို ကမ္ဘာနဲ့အ၀န်း ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံနေရလို့လည်း ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်
တွေကြား အပူတပြင်း ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွား
ပျက်ကပ်ဆိုက်မယ့် အခြေအနေအထိ ဦးတည်သွားလေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေကြ
တဲ့နေရာမှာ ဒီကနေ့ဆိုရင်လည်း အီးယူ (ဥရောပသမဂ္ဂ) ဥက္ကဋ္ဌ ဂျိုဆေး ဘာရိုဆို
(Jose Barroso) က ဒီပြဿနာကို တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်း
ဖြေရှင်းဖို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မနက်ဖြန် တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့မှာ ကျင်းပမယ့်
အာရှ-ဥရောပ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဒီကိစ္စကိုပဲ အလေးထား ပြောဆိုသွားမယ်လို့လည်း
ပြောဆိုထားတာပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်း လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်
နေ့ကျရင် ဒီစီးပွားရေးပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ ကမ္ဘာ့စက်မှုထိပ်သီး နိုင်ငံ
၂၀ ကို ဖိတ်ကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့အရေး အီးယူ-အာရှ အစည်းအဝေးမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ တောင်းဆို
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် အာရှ-ဥရောပ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာ
နိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာအောင် စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းနားချနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကို အသုံးချဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက နိုင်ငံ တကာခေါင်းဆောင်တွေကို တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ
ရောက်နေတဲ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် ၀ိုင်းတော်သူ ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြ ပေးထားပါတယ်။
၇ ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပ ထိပ်သီးညီလာခံကို တက်ရောက်လာကြမယ့် နိုင်ငံ
၄၅ နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်
လာမယ့် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ
လုပ်ဖို့၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေပေးဖို့ ဖိအားပေးနိုင်မယ့် အခွင့်
အလမ်း ရနေတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့ အာရှဒေသဆိုင်ရာ သုတေ
သနမှူး ဒေးဗစ် မက်သီဆန်က ပြောပါတယ်။
"ဥရောပနဲ့ အာရှ နိုင်ငံ ၄၅ နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် ဒီအစည်းအဝေးဟာ
တကယ့် အခွင့်အလမ်းတခုပါပဲ။ သူတို့အနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားအောင် ဖိအားတွေပေးဖို့အတွက်
ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးရင် ရမယ်ဆိုတာကို အတူတကွ ရှာဖွေနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း
ပါ။ ဒါတင်မကသေးဘဲ မကြာခင်နှစ်တွေအတွင်း နိုင်ငံတကာကနေ လက်ခံလာလောက်
တဲ့ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေ မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်ဖို့အတွက် မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်ကို
တိုက်တွန်းနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းပါ ရတယ်" လို့ ပြောသွားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးအကြံပေး မစ္စတာ အီဘရာဟင်မ် ဂမ်ဘာရီ
(Mr. Ibrahim Gambari) ဒီနှစ်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ကြိမ်သွားရောက်ပြီး ကြိုးပမ်းခဲ့
ပေမယ့် ဘာမှအရာမထင်ခဲ့တာမို့ အခုလို ဥရောပနဲ့ အာရှခေါင်းဆောင်တွေ စုစု
ဝေးဝေး တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာ့အရေးကို ဖိအားပေးပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ လူ့အခွင့်
အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူ ဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ တွေ့ဆုံ
ဆွေးနွေး အဖြေရှာတာတွေ မလုပ်မချင်း ဥရောပနိုင်ငံတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့
အပေါင်းအပါတွေ လာရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ အာဆမ်
ညီလာခံကို ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဟမ်းဘာ့ဂ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်
ဒါ့အပြင် ဥရောပသမဂ္ဂဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရင်က ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
တွေတင်မက ဘက်စုံအကူအညီတွေ အများကြီးပေးခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သံဃာ
တော်တွေဦးဆောင်တဲ့ ဆန္ဒပြတာကို ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းခံရတာနဲ့ နာဂစ်
ဆိုင်ကလုန်းဒဏ် ခံရပြီးနောက် စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် အရေးယူ
ဒဏ်ခတ်တာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာမို့ အခု အာဆမ်ညီလာခံမှာလည်း ဖိအားတွေပေးဖို့
"ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဒေသတွင်းက အဓိက အာရှနိုင်ငံကြီးတွေကို ဖိအားပေးတာ
လုပ်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်၊ စင်ကာပူနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအပြင် အိန္ဒိယ
အစိုးရတွေကိုပါ သူတို့ရဲ့ သြဇာအာဏာတွေကိုသုံးပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က လူ့အခွင့်
အရေး ချိုးဖောက်တာတွေမလုပ်ဖို့ ဖိအားပေးနိုင်ပါတယ်။ အီးယူ ဥရောပကော်မရှင်က
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားပေးသလို အာဆမ်အဖွဲ့အနေနဲ့လည်း လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်း
နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး
အတွက် အချိန်ဇယားချပြတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေမှာ ဖိအားပေးနိုင်ပါတယ်" လို့ ပြောသွားပါ
ဒီအာဆမ်ညီလာခံ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း
ဂိုချောက်တောင်း (Goh Chok Tong) ကလည်း အာဆမ်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာသာ မရှိဘူးဆိုရင် အတော့်ကို ကြီးကြီး
မားမား တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က တရုတ်အသံလွှင့်ဌာန စီစီတီဗွီ
နဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်း ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပလိုက်တိုင်း ဒီထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပါနေတဲ့
အတွက် အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂက ထိထိရောက်ရောက် လက်တွဲမဆောင်ရွက်တဲ့အပြင်
ဒါဟာ အာရှ-ဥရောပ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် ပြဿနာဖြစ်လာစေတယ်လို့လည်း မစ္စတာ
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့် အနောက်နိုင်ငံတွေက
မြန်မာနိုင်ငံမပါဖို့ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေရာက ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကမှ အာဆမ်ဆွေးနွေးပွဲ
တွေမှာ မြန်မာပါဝင်တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ အခုလို အာဆီယံဘက်က မြန်မာ
နိုင်ငံအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်က တာဝန်မကျေတာကို
စင်ကာပူနိုင်ငံက ပြောခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မစ္စတာ မက်သီဆန်က …
"စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဂိုချောက်တောင်းပြောတာတွေကို သဘောတူရမှာပါ။ စစ်အစိုးရ
ခေါင်းဆောင်တဦးက ဒီညီလာခံမှာ သူ့ရဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ ပူပန်နေရတဲ့
သဘောထားကို ကြားသင့်ပါတယ်။ ဒီညီလာခံမျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အမြဲတမ်းပဲ
ဖိတ်ခေါ်သင့်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကိုယ်ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်
ကိုယ်ယူဖို့ ကိစ္စမျိုးကို ကြားနာသင့်ပါတယ်" လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထိန်းသိမ်းခံသက်တမ်း ၁၃ နှစ် ပြည့်ပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာ မနက်ဖြန်ဆို ၁၃ နှစ်ပြည့်ပြီဆိုပြီး
ကမ္ဘာအနှံ့က မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကနေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
အကြောင်းစုံကို ကိုသားညွန့်ဦးက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
တကယ်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခုနောက်ဆုံးအကြိမ်မှာ ၂၀၀၃ မေလက စတင်ပြီး
ဖမ်းခံရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉ နှစ် ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းကဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အကြိမ်ကြိမ် နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းခံရတာကြောင့် ဒီရက်တွေကိုပေါင်းပြီး ၁၃ နှစ်ပြည့်လို့ ဒီ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက မနက်ဖြန်ကို သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။ အာရှမှာအခြေစိုက်တဲ့ Altsean-Burma လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကတော့ အခု ဒီရက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ အဓိကထား တောင်းဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် အမျိုးသမီးအကျဉ်းသားတွေကို ရွေးပြီး တောင်းဆိုခဲ့တာလဲလို့ Altsean-Burma က ဒက်ဘီ စတော့ဟတ်ကို မေးကြည့်ပါတယ်။
"တကယ်တမ်းတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတာ
ပါ။ ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖမ်းဆီးခံရတာ ၁၃ နှစ်မြောက်
အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အခု ဒီ သုံးလေးနှစ်အတွင်းမှာ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား
တွေ ပိုများလာတယ်ဆိုတာကို အများက သတိပြုမိစေချင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ
လ သံဃာလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖမ်းခံရတဲ့အထဲမှာ အသက် ၈၀ အရွယ် သီလရှင်ကြီး အပါ
အ၀င် အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အခြေအနေတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေတာ
ကို သိရတော့ အရမ်းကို တုန်လှုပ်မိတာလည်း ပါပါတယ်။"
အမျိုးသမီးအကျဉ်းသားတွေ အထူးသဖြင့်ဆိုရင် အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်တဲ့ အမျိုးသမီး
တွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက အကျဉ်းထောင်အခြေအနေကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့
လည်း ဒက်ဘီ စတော့ဟတ်က ပြောပါတယ်။
"နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ရပါတယ်။ အခုလက်ရှိ အကျဉ်း
ထောင်တွေမှာ အထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စုစုပေါင်း ၂,၁၃၀ ထဲမှာ
အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟာ အနည်းဆုံး ၁၇၉ ဦး ရှိပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီး
အတော်များများဟာ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းအမျိုးမျိုး
ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ ဒီလို ဆိုးဝါးတဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ
အခုနကပြောတဲ့ အသက် ၈၀ အရွယ် သီလရှင်ကြီးလိုမျိုး၊ အသက် ၆၀-၇၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့
အမျိုးသမီးကြီးတွေ ဘယ်လိုများ နေထိုင်ရမလဲဆိုတာ။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည် အပါအ၀င် ဒီ ၁၇၈ ယောက်သော အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့
အခြေအနေဟာ အတော်လေး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရှိပါတယ်။"
ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာ ဘာရာဇ၀တ်ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုတစုံတရာ ကျူးလွန်တာမရှိဘဲ
ထောင်တွင်း အကျဉ်းချထားတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ်မှာလည်း နားမလည်နိုင်
အောင် ဖြစ်ရတယ်လို့ ဒက်ဘီ စတော့ဟတ်က ပြောပါတယ်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျယ်ချုပ်သဘော နေအိမ်မှာ အကျဉ်းချထားပါတယ်
ဆိုတာတောင်မှ အခြားကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေက သာမန်အကျဉ်းသားတွေ
ရနေတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးတောင် မရပါဘူး။ သူဟာ ပုံမှန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်
မရပါဘူး။ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်မရပါဘူး။ သူ့ရဲ့ရှေ့နေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့
တောင် တွေ့ခွင့်မရပါဘူး။ ဒါဟာ အတော့်ကို ဆိုးတဲ့အခြေအနေပါ။ စစ်သား ၄၀၀,၀၀၀
ရှိတဲ့ ဒီစစ်အစိုးရဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီလောက်ကြောက်ရွံ့ပြီး အခု သော့ပိတ်
ထိန်းသိမ်းထားသလဲဆိုတာ နားလည်လို့မရပါဘူး။ အသက် ၈၀ အရွယ် သီလရှင်ကြီးကို
လည်း ဘယ်လိုကြောင့် ဒီလောက်ကြောက်ရွံ့ပြီး ထိန်းသိမ်းထားသလဲဆိုတာ နားမလည်
နိုင်ပါဘူး။ ဒီ ၁၇၉ ယောက်သော အမျိုးသမီးတွေဟာ လူ့ဘောင်အတွက် ဘာမှ အမှား
အယွင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီစစ်တပ်က ဘယ်လိုကြောင့် ကြောက်လန့်ပြီး ထိန်းသိမ်း
မကြာခင် ပြီးခဲ့တဲ့လက စစ်အစိုးရကနေ အထင်ကရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးဖြစ်တဲ့
ဦးဝင်းတင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ကို လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဖမ်းလိုက် လွှတ်လိုက် လုပ်နေတဲ့
သဘောကြောင့် ဒီလိုလွှတ်ပေးတာဟာ တိုးတက်လာတယ်လို့ ဒက်ဘီ စတော့ဟတ်က
တိုက်ဆိုင်စွာပဲ မနက်ဖြန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖမ်းခံရတဲ့ ၁၃ နှစ်ပြည့်ချိန်မှာ
တရုတ်မှာတော့ ဥရောပနဲ့ အာရှ အာဆမ်အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပမှာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း အင်္ဂလန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားတဲ့ Burma Campaign UK
ရော သြစတေးလျက Burma Campaign Australia တို့ကနေ မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်း
သားတွေ လွတ်မြောက်ရေး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေက အခု ဒီ အာဆမ်အစည်းအဝေး
ကြီးအတွင်း ဖိအားပေး ပြောဆိုဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
rand Royal ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နှင့် မြန်မာ ပွဲဦးထွက် ဆော်မည်
နိုဝင်္ဘလာ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့ထိ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် Grand Royal ဘော်လုံး ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနှင့်ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံတို့ ပွဲဦးထွက် ကစားကြမည် ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှာ အုပ်စု(က)တွင် မြန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်အတူ ပါဝင်ပြီး နိုဝင်္ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ၊ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ကစားမည် ဖြစ်သည်။
အုပ်စု(ခ)တွင် မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် Hyundai FC တို့ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမည် ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှာ ယခု မလေးရှားတွင် ကျင်းပနေသော မာဒေးကားဖလား အုပ်စုပွဲစဉ်တွင် မြန်မာကို တဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် ရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖလံထောင်မှ ဗိုလ်မင်းရာဇာ မတော်တဆ ကားတိုက်မှုကြောင့် သေဆုံး
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ် ရခိုင်အခေါ် ဖလံထောင် (ယခုအခေါ် ခါကာဆိုရီ)မှ ဗိုလ်မင်း ပန်းလှဖြူမှာ မတော်တဆ ကားတိုက်မှုကြောင့် ယမန်နေ့က ကွယ်လွန် အနိစ္စရောက်သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သူ၏ သားဖြစ်သူ မင်းသား သာစိန်ဖြူမှာလည်း တခြား လူ ၂၀ ဦးနှင့်အတူ ဒဏ်ရာ ရရှိသွားကြောင်း သတင်းများက ဖေါ်ပြသည်။
ဒက္ကားမြို့မှ ခါကာဆိုရီသို့ ဘတ်စ်ကားတစီးဖြင့် အသွားတွင် ကားမှာလမ်းဘေးရှိ ချောက်ထဲထိုးကျသွားရာမှ ဗိုလ်မင်း ပန်းလှဖြူမှာ သေဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကြေကွဲဖြစ်ရပ်အား ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံထုတ် သတင်းစာများတွင် ခေါင်းကြီးပိုင်းက ဖေါ်ပြသည်။
ဗိုလ်မင်း ပန်းလှဖြူမှာ သြစတြေးလျနိုင်င်သို့ ၁၂ ရက်ကြာ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် အင်္ဂါနေ့ ၎င်း၏နေရပ်ဒေသ ခါကာဆိုရီသို့ ပြန်လာစဉ် ယခုကဲ့သို့ ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်နှင့် ကြုံတွေ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်မင်း ပန်းလှဖြူမှာ အသက် ၅၅ နှစ်ရှိပြီး သူ့တွင် ဇနီး မဟာဝီလတာ ချော်ဒူရီ၊ သား သာစိန်ဖြူ၊ သမီး ဦးမစိန် (၂၆ နှစ်)နှင့် သမီး ဦးနုစိန် (၂၃ နှစ်) တို့ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်မင်း ပန်းလှဖြူ အပါအ၀င် အဆိုပါဒေသရှိ ဒေသခံများမှာ ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့ မာရမာ လူမျိုးများဟု ခံယူကြသော်လည်း ရခိုင်မျိုးနွယ်စုများဖြစ်ကြပြီး အဆိုပါ ဒေသကို ဗိုလ်မင်း စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်လာခဲ့သည်မှာ ရခိုင်ဘုရင်များလက်ထက် ကတည်းက ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ဘုရင်များ လက်ထက်တွင် အဆိုပါ စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ်တွင် ဗိုလ်မင်းထောင်၊ ဖလံထောင်နှင့် သက်ထောင်သုံးခု တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါ အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံစနစ်မှာ ယခုအချိန်ထိ အဆိုပါဒေသတွင် တည်တံ့နေသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အဆိုပါ ဒေသသုံးခုအား အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသူ ဗိုလ်မင်းများမှ အခွန်ဆက်သပွဲကို မင်းခန်းမင်းနားဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပ လေ့ရှိသည်။
USDA member extorted by Junta agency
A member of junta-backed Union Solidarity and Development Association (USDA) was fined when his livestock was found grazing on rubber plantation owned by electricity department in Mongyang township, eastern Shan State, according to sources.
Sai Peng Hsung, 51, was told to pay Kyat 50,000 (US $42) for each buffalo. He had to pay Kyat 300,000 (US $ 250) for6buffaloes, saidalocal villager.
“Will you come to claim your buffaloes with the amount we are asking, or go to the police?”avillager quoted U Kyaw Naing, an officer of electricity department, saying.
The said rubber plantation is about2acres and there are around 30 to 40 plants in the plantation.
“None of the plants were ruined,” said the source.
Sai Pen Hsung has beenamember of the USDA for over3years.